सम्बन्ध | Nepali Virals
अप्रिल 12, 2016 | राजनीति, समाज, सम्बन्ध, हट टपिक्स
अबको केही घण्टामा हामी नया बर्षमा प्रवेश गर्दै छौ । यो बर्ष थुप्रै उथलपुथलहरु भए । कतिपयका लागि जीवनभर नमेटिने दाग बने भने कतिपयका लागि सुखद रहे । समग्रमा यो बर्ष खासै सफल बन्न सकेन । त्यसका बाबजुद पनि केही आशातित प्रगतिहरु भने नभएका होइनन । यो बर्ष बिशेषत: केही महिलाहरुका लागि स्मरणीय बर्षको रुपमा रहन सफल भयो । यो वर्ष नेपालले प्रमुख पाँच पदमध्ये राष्ट्रपति, सभामुख तथा प्रधान न्यायाधीशका रूपमा महिला नेतृत्व प्राप्त गरेको छ ।
लामो समयदेखिको नेपाली जनताको चाहना यो बर्ष पूरा भयो । यो बर्ष संविधानसभामा जनताद्वारा निर्वाचित करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिमा नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको हो । यो संविधानसँगै नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं संघीयताको नयाँ इतिहास प्रारम्भ भएको छ । यसको कार्यान्वयनको पक्ष जटिल अवश्य छ तर संविधानमा समेटिएका विषयवस्तुको हिसाबले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूमध्ये एक मानिएको छ ।
संविधान निर्माणपछि संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण गरियो । त्यसपछि लामो समय सभामुख रहेका सुवास नेम्वाङको स्थानमा ओनसारी घर्ती सभामुख निर्वाचित भइन् । १० बर्ष युद्ध लडेकी एउटी दुर्गम ठाउँकी महिला मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्ने अबसर यसै बर्ष मिल्यो ।
यसै बर्ष नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा विद्या भण्डारीले नाम लेखाउन सफल बनिन् । संसदमा भण्डारीले ३ सय २७ मत पाएर राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । भण्डारीले कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रि कुलबहादुर गुरुङलाई पराजित गर्नुभएको हो । गुरुङले २ सय १४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
२०१८ साल असार ५ गते भोजपुरको मानेभञ्ज्याङ गाविसमा पर्ने गुराँसेमा जन्मिएका भण्डारीले २०३९ सालमा तत्कालिन नेकपा (माले)का नेता मदनकुमार भण्डारीसँग भूमिगत विवाह गरेका थिए । २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दाशढुंगामा भएको रहस्यमय जीप दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भएपछि राष्टपति भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । राष्ट्रपनि निर्वाचित भण्डारीले २०६७ सालमा रक्षा मन्त्री भएर काम गरेका थिए ।
सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा अबको केही दिनमा नियुक्त हुदै छिन । उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आगामी वैशाख १ गतेदेखि अवकाश पाउँदै छन् । कानुन अनुसार अब संसदीय समितिबाट कार्कीको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिन्छ ।
विस २०६५ साल माघ ९ गते सुशिला सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी हुन् । त्यसको दुई वर्षपछि ०६७ मंसिर २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनिन् । अहिले उनी बरिष्ठ न्यायाधीश छिन् । कार्कीको ’boutमा थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व पनि यो बर्ष महिलाको हातमा पुग्यो । दीपक गौतमलाई पराजित गर्दै नविना लामा अखिलको २२ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन । रामकुमारी झाँक्रीपछि लामा अखिलको अध्यक्ष बन्ने महिला नेतृ हुन् ।
अप्रिल 11, 2016 | फेमस, समाज, सम्बन्ध, हट टपिक्स
२०७२ को भोलि अन्तिम दिन । बुधबारदेखि हामी नयाँ बर्षमा प्रवेश गर्दैछौ । भूकम्प, नाकाबन्दी इत्यादि कारण यो बर्ष खासै सुखद हुन् सकेन । तर यसका बाबजुद पनि केही राम्रा काम पनि भएका छन् । खेलकुद क्षेत्रमा थुप्रै राम्रा/नराम्रा घटनाहरु घटे । यस मध्ये कतिपय घटनाहरु कहिल्यै बिर्सिन नसकिने खालका छन् । समग्रमा २०७२ साल खेलकुद जगतका लागि के कस्तो रहयो त ? हेर्नुस २०७२ का अविस्मरणीय ६ घटना ।
२०७२ मा सर्वाधिक चर्चित घटना बन्यो म्याच फिक्सिंङ् । गत असोज २७ गते नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सागर थापासहित पाँच खेलाडी र एक प्रशिक्षकलाई पहिलो पटक म्याच फिक्सिङको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा फुटबल टिमका खेलाडीलाई विदेशबाट रहस्यमयरुपमा पैसा आउने गरेको खुल्दै गयो ।
उनीहरुको बैंक खातामा विभिन्न देशबाट आएका पैसाको कुनै पनि स्रोत थिएन, जसले फिक्सिङको शङ्कालाई थप बलियो बनायो । अनुसन्धानबाट यतिसम्म खुलेको थियो कि सट्टेबाज तथा नेपाली खेलाडी खरिद गर्नेहरुले नेपालमै आएरसमेत रकम बुझाएका थिए । प्रहरीले देशद्रोहको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो तर अदालतले उनीहहरूलाई धरौटीमा मुक्त गरिदियो ।
(साग) मा १९९३ यताकै सबैभन्दा खराब
गत माघमा भारतको गुवाहाटी र सिलोङमा सम्पन्न १२ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालको आशातित सफलता हात लागेन । प्रतियोगितामा नेपालले तीन स्वर्ण जितेको थियो तर यो सन् १९९३ यताकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो । सागमा नेपालले तीन स्वर्णसहित २३ रजत र २४ कास्यसहित कुल ६० पदक हात पा¥यो ।
ढाकामा सम्पन्न बङ्गबन्धु कपको सेमिफाइनलमा माल्दिभ्समाथि ४–१ को जित निकालेपछि आर्मीका फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ एकाएक चर्चित बने । नेपालको जितमा विमल घर्तीमगर, विशाल राई र नवयुग श्रेष्ठले एक, एक गोल गरेका हुन्। उनले उक्त खेलमा ह्याट्रिक गरेका थिए ।
उपाधि सहित नेपालले ५० हजार अमेरिकी डलर पनि जितेको छ । नेपालले यसअघि सन् १९९३ मा ढाकाको यही बंगबन्धु रंगशालामा भारतलाई हराई दक्षिण एशियाली खेलकूदको च्याम्पियन बनेको थियो । भारतको इन्दिरा गान्धी स्टेडियम, गुवाहाटीमा भारतलाई २–१ ले पराजित गर्दै क्षेत्रीय खेलकुदको उपाधिमाथि कब्जा जमायो ।
गणेश थापामाथि कारबाही
क्रिकेटले यो बर्ष आशातित सफलता पाउन सकेन । यु–१९ टोली विश्वकपमा छनोट हुनका साथै विश्वकपको दोस्रो चरणसम्म पुग्न सफल भयो । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीपका लागि छनोटबाहेक नेपाली क्रिकेटले यो वर्ष खासै राम्रो नतिजा निकाल्न सकेन ।
यसै वर्ष नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतले सफाइ त दियो तर त्यो कार्यसमितिले सही तवरले नयाँ नेतृत्व छनोट गरेन । गुटको राजनीतिक चलखेलबीच चतुरबहादुर चन्द क्यान अध्यक्ष त भए तर त्यसलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले त्यसलाई अवैध ठह¥याउँदै क्रिकेटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी क्यानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेलाई दिँदै रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ कमिटी बनाइदियो ।
यो वर्ष भलिबलमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालले उपाधि जित्न सकेन् भने नेपाल भलिबल सङ्घले पनि कुनै प्रतियोगिता गरेन । तर निजी क्षेत्रले आधा दर्जन प्रतियोगिता सञ्चालन गरे । भलिबलमा यो बर्ष सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफले उपाधि कब्जा गरे ।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की’bout ५ जानकारी
अप्रिल 11, 2016 | फेमस, बिर्सेका, समाज, सम्बन्ध, हट टपिक्स
अबको केही साता भित्र मुलुकले पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउने छन् । संवैधानिक परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ ।
कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश हुने छिन् । उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आगामी वैशाख १ गतेदेखि अवकाश पाउँदै छन् । कानुन अनुसार अब संसदीय समितिबाट कार्कीको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिन्छ ।
सबैको चियो र चासोको पात्र बनेका कार्कीको ’boutमा हामीले ५ जानकारी प्रस्तुत गरेका छौ जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ र थाहा पाई राख्न जरुरी पनि छ ।
१. जन्म र परिवार
बिस २००९ साल जेठ २५ गते बिराटनगर-३ शंकरपुरमा जन्मेका सुशीला कार्कीको घर बिराटनगरमा वडा नं ११ स्थित हाम्रो चोकमा छ । काठमाडौंमा उनी धापासीमा बसोबास गर्छिन् । उनी कांग्रेसका त्यागी नेता दूर्गा सुवेदीकी पत्नी हुन् । उनका प्रशान्त सुवेदी एक छोरा छन् ।
सुशीलाले सन् १९७२ मा २० वर्षको उमेरमा महेन्द्र मोरङ कलेज बिराटनगरबाट बीए उत्तीर्ण गरिन् । त्यसको तीन वर्षपछि उनले भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरिन् । त्यसपछि बल्ल उनी कानूनको अध्ययनतिर लागिन् । र, २६ वर्षको उमेरमा सन् १९७८ मा उनले त्रिविबाट कानूनमा स्नातक (बीएल) गरिन् ।
विसं. ०३५ साल चैत्र १६ गतेदेखि सुशीलाले अधिवक्ताका रुपमा आफ्नो करिअर सुरु गरिन् । ०४३ सालदेखि ०४६ सालसम्म उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन् ।
४. अध्यक्षको जिम्मेवारी
उनले २०४५ सालदेखि ०४७ सालसम्म कोशी अञ्चल बारको अध्यक्ष भएर काम गरिन् । त्यस्तै ०५९ सालदेखि ०६१ सालसम्म बिराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनिन् । सुशीला ०६१ साल पुस ५ गते बरिष्ठ अधिवक्ता बनिन् ।
५. सर्वोच्च प्रवेश
विस २०६५ साल माघ ९ गते सुशिला सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी हुन् । त्यसको दुई वर्षपछि ०६७ मंसिर २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनिन् । अहिले उनी बरिष्ठ न्यायाधीश छिन् । बरिष्ठताका आधारमा अबको केही साता भित्रै उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने छैन ।
अप्रिल 6, 2016 | समाज, सम्बन्ध, हट टपिक्स, हाँसोउठ्दो
भनिन्छ, एउटा सफल पुरूषको पछाडी एउटा महिलाको हात हुन्छ। त्यो हात भनेको प्रेरणा, उत्साह अनि साथको हो। त्यसैले त जिवनका उकाली ओरालीहरूमा नारी र पुरूष रथका दुई पांग्रा बनेर गुड्छन्। यो गुडाईलाई र सम्बन्धलाई पुरूष सफलतासँग जोडेर हेर्दा समाजले लच्छिन र अलच्छिनको कुरा गर्छ। नेपाली समाज धेरै लामो समय देखी मानिसको शरिर, व्यवहार र सोचलाई लच्छिन र अलच्छिनको आँखाले हेर्छ। त्यसैले त छोराको लागी बुहारी खोज्न निस्कने अभिभावकले केटीको आँखा कैलो छ कि छैन खुट्टामा रौं छ कि छैन हेर्छन। अनि केही लच्छिनकी हुने की अलच्छिनको हुने पत्तो लगाउँछन्। यसरी महिलाको अंग तथा व्यवहारबाट मानिस पत्तो लगाउने चलन नेपालमा मात्र होईन विकसित र वैग्यानिक भनेका यूरोप र अमेरिकामा पनि छ।
संसारमा सबै भन्दा बढी कसैको कुरा हुन्छ भने त्यो महिलाको नै हो। महिलाका सबै पक्ष’bout लेख्ने र बयान गर्ने हो भने ४ वेद १८ पुराणलाई पछी पार्ने गरेर नयाँ पुराण र महाभारतहरूको नै सृजना हुनसक्छ। त्यसो त धेरै स्वस्थानीमा सुनिने शेषनागले पनि महिलाको ’boutमा सांगोपांग बयान गर्न सक्नेमा शंका व्यक्त गर्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरू सिधै भनिदिन्छन् महिलाको ’boutमा बयान गरि साध्य छैन। महिला भन्नुस नारी भन्नुस वा केटी यीनमा अनौठो जादु नै हुन्छ। पुरूष प्रति बरू महिला आकर्षित नहोलान् तर महिलामा प्रकृतिले यस्तो गुण दिएको छ कि हरेक पुरूष महिला प्रति अाशक्त नै हुन्छ। यस्तो नारी प्रती पुरूषको आशक्ति पनि महिलाको कारभ नै पैदा हुन्छ, के तपाईंलाई थाहा छ, महिलाका हरेक अंगमा केही न केही राज लुकेको हुन्छ । त्यसले उनीहरुको स्वभावदेखि लिएर भविष्यसम्मका विभिन्न जानकारी दिनसक्छ । हेर्नुस कुन अंगमा के राज लुकेको हुन्छ ?
ठूला आँखा हुने महिलाहरु खुल्ला विचार र दयालु स्वभावका हुन्छन् । उनीहरुको मन पनि आँखाजस्तै विशाल हुन्छ ।
सानो र चटक्क छिनेको कम्मर हुने महिलाहरु भाग्यमानी हुन्छन् ।
नाभीको भित्रीभाग गहिरो भएका महिलाहरु सौभाग्याली र सुख दिने खालका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरुले घरमा पनि समृद्धि ल्याउँछन् ।
चिटिक्क परेको सुन्दर नाक भएका महिलाहरुलाई सुख र खुसी प्राप्त हुन्छ । यिनीहरु परिवारका अन्य सदस्यका लागि पनि भाग्यशाली ठहरिन्छन् ।
जसको पेट मूलायम र पातलो हुन्छ उनीहरु सुखभोग गर्ने खालका हुन्छन् । उनीहरुलाई उच्च पद प्राप्त हुनसक्छ । यिनीहरु सामाजिक र धार्मिक स्वभावका पनि हुन्छन् ।
पैताला मुलायम हुने महिलाहरु सुख भोग गर्ने स्वभावका हुन्छन् ।
कपाल सिल्की र स्टेट हुने महिलाहरु सरल हुन्छन् । यिनीहरु कुरालाई घुमाएर गर्न र त्यसरी गरिएको कुरा बुझ्न नसक्ने हुन्छन् । प्राय: सरल र खुल्ला दिमागका हुन्छन् ।
जुन महिलाको ओंठ सानो हुन्छ, उनीहरु कडा स्वभावका हुन्छन् । तर, मुटूकोजस्तो सेपका सुन्दर ओंठ हुने महिलाहरु विश्वासले भरिपूर्ण तथा आकर्षक र सेक्सी हुन्छन् ।
लामो र पातलो नङ भएका महिलाहरुमा दृढता र मानसिक क्षमताको अभाव हुन्छ । यिनीहरु विचारका हिसाबले कमजोर हुन्छन् ।
मार्च 31, 2016 | फेमस, बिर्सेका, सम्बन्ध, हट टपिक्स
‘महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा’ त्यसै भनिएको होइन । जब अबसर पाउछ तव दुबैले उतिक्कै प्रगति गर्न सक्छन । तर नेपालमा अझै पनि पुरातन सोच र ब्यबहार हावी छ जसले गर्दा महिलाहरु जहिले पनि पुरुषको नियन्त्रणमा छन् । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा केही मात्रमा महिला अधिकारका कुरा ब्यबहारमा लागु भए ता पनि ग्रामिण क्षेत्रको अबस्था एकदमै नाजुक छ ।
असक्षम, बोक्सी, दाइजो लगायत बिबिध निहुमा महिला आमा, दिदीबहिनीहरु दिनहु प्रताडित भैरहेका छन् । अबसर पाएमा महिलाहरुले पुरुषहरुले भन्दा पनि उत्कृष्ट काम गर्न सक्छन भन्ने केही उदाहरणहरु आज हामी प्रस्तुत गर्दै छौ । यी ६ नारी मध्ये केहीले नेपालको नाम बिश्वमा चिनाए भने केहिले नेपालको सस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै बिकासमा टेवा पुर्याए ।
१. अरुणा लामा
नेपाली गायन क्षेत्रको एक सुप्रसिद्ध गायिका अरुणा लामालाई ‘स्वर किन्नरी’का रूपमा लिइन्छ । वि.सं. २००२ भाद्र २४ को दिन पिता सूर्यबहादुर लामा र माता सानमाया लामाबाट दार्जिलिङको घूम पहाडमा जन्मिएकी अरुणा लामाको पहिलो गीत ‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाईदेउ न’ थियो भने ‘किन यौवन उदास उदास छ मेरो’ भन्ने गीतबाट उनको गीति यात्रा अघि बढेको थियो।
वेदना, पीडा र व्यथाका गीतहरूको साम्राज्ञी लामाको पहिलो गीत वि.सं. २०१२ देखि रेडियोमा बज्न सुरु गरेको थियो। उनले आफ्नो गायन कलाको लागि नेपाल र भारत दुवै देशबाट अनेकौँ पुरस्कारहरू पाएकी थिइन्। उनले सङ्गीत पुरस्कार, सुर श्रृङ्गार सम्मेलन पुरस्कार, मित्रसेन पुरस्कार, दिशारी पुरस्कार (कोलकता), भानु एकेडेमी पुरस्कार (दार्जिलिङ), नेपाली चलचित्र पुरस्कार (माइतीघर गीतको लागि), छिन्नलता गीत पुरस्कार, उर्वशीरङ्ग पुरस्कार, गोरखादक्षिण बाहु पुरस्कार, साधना पुरस्कार जस्ता थुप्रै पुरस्कारहरू पाएकी थिइन् ।
लामाको वि.सं. २०५४ माघ २२ गते बुधबारको दिन दुखद निधन भयो ।
२. अनुराधा कोइराला
भारतीय कोठीहरूमा बेचिएका नेपाली चेलीबेटीहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनामा सक्रिय ‘माइती नेपाल’की संस्थापक अध्यक्ष हुन्- अनुराधा कोइराला । वि.सं. २००६ वैशाख २ गते ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा जन्मेका कोइरालाले वि.सं. २०६६ सालमा सीएनएन हिरो (CNN Hero) को उपाधि पनि जितेकी थिइन् । साथै उनले वि.सं. २०७० सालमा ‘मदर टेरेसा’ सम्मान पनि पाइन् ।
३. पासाङ ल्हामु शेर्पा
बि.सं. २०१७ साल मङ्सिर २५ गते सोलुखुम्बु जिल्लाको चौरीखर्क, लुक्ला सुर्के-४ मा जन्मिएकी पासाङ ल्हामु शेर्पा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने प्रथम नेपाली महिला हुन् । उनले बि.सं. २०५० साल वैशाख १० गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्।
पासाङ ल्यामुको साहसको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले बि.सं. २०५९ साल वैशाख १० गते उनलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूती घोषित गरेको थियो। नेपाल सरकारले उनलाई ‘नेपाल तारा अलंकार’ले पनि पुरष्कृत गरेको थियो। यसका साथै उनको पूर्ण कदको शालिक र उनको फोटो सहितको हुलाक टिकट पनि प्रकाशित भएको थियो ।
पासाङ ल्हामुले सगरमाथ चढ्नुभन्दा पहिले ‘मोन्ट ब्लाङ्क’, ‘चो यू’ तथा अन्य हिमालहरू चढिसकेकी थिइन् । उनले सगरमाथाको दक्षिणी मोहडाबाट आरोहण गरेकी थिइन् भने शिखरबाट श्रीमान सोनाम छिरिङसँग फर्कँदै गर्दा बि.सं. २०५० वैशाख १० गते ३२ वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भएको थियो।
वि.सं. २०३७ साल असार २१ गते धनकुराको कचिडेमा जन्मिएकी झमक कुमारी घिमिरे प्रतिभावान नेपाली महिला स्रष्टा हुन्। ‘सेरिब्रल पल्सी’ (Cerebral Palsy) मस्तिष्क रोगबाट पीडित घिमिरे जन्मदेखि नै हात गोडा नचल्ने, उभिन, हिँड्न, बोल्न नसक्ने समस्याबाट पिडित छिन ।
खुट्टाको ३ औँला मात्र चल्ने उनले तिनै ३ औँलाको सहयोगले धेरै रचनाहरू प्रकाशित गरिसकेकी छिन्। औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकी हुन्। वि.सं. २०५३ साल देखि उनको लेखन विधामा रुचि बढेको हो।
उनले आफ्नो ‘जीवन काँडा की फूल’ नामक आत्मकथाबाट नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा सबैभन्दा सम्मानित ‘मदन पुरस्कार’ पनि पाएकी छिन् भने प्रबल गोरखा दक्षिण बाहुर लगायत दर्जनौँ पुरस्कार एवम सम्मान प्राप्त गरेकी छिन् । कान्तिपुर र ब्लास्ट टाइम्स पत्रिकामा उनका नियमित स्तम्भहरू पनि छापिन्छन् ।
५. पुष्पा बस्नेत
‘प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र’ र ‘पुतली घर’ नामक गैरसरकारी संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष हुन्- पुष्पा बस्नेत । उनी विभिन्न कारणले कैदमा परेका अभिभावकका छोराछोरीको अधिकारको सुरक्षा गर्ने काममा क्रियाशील छिन । पुष्पाले २०१२ का लागि सीएनएन हिरोको उपाधि जितेकी थिइन् ।
६. तारा देवी
वि.सं. २००२ साल माघ २ गते जन्मिएकी प्रसिद्ध नेपाली गायिका हुन्- तारादेवी । उनले आफ्नो जीवनकालमा ४ हजार भन्दा बढी नेपाली गीतहरू गाएकी छिन् ।
४ दशकदेखिको अथक साधनाद्वारा गायनकलामा उत्कृष्टता हासिल गरी नेपाली भाषालाई स्वदेशभित्र र बाहिरसमेत सङ्गीतको मधुरिमा द्वारा लोकप्रिय बनाई नेपाली वाङमयको श्रीवृद्धि गर्नमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोले उनलाई राष्ट्रिय देनको कदर स्वरूप वि.सं. २०५० सालमा ‘जगदम्बाश्री पुरस्कार’ले सम्मान गरियो ।
उनले ‘इन्द्रराज्यलक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार’, ‘छिन्नलता पुरस्कार’, ‘मैना पुरस्कार’ र ‘नई सुर सम्मान’ पाइन् । उनी सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु प्रथम बाट पनि विभूषीत भइन् । उनले महेन्द्ररत्न आभूषण, गद्दी आरोहण रजतपदक, विरेन्द्र ऐश्वर्य सेवापदकका अतिरिक्त स्वदेश तथा विदेशबाट अन्य थुप्रै पदक, पुरस्कार, सम्मान र अभिन्नदनहरू पनि पाएकी थिइन् । उनको वि.सं. २०६२ सालमा दुःखद निधन भयो ।